Anfield Ayaa Lagu Soo Fadeexadeeyay, Valencia Ayaa Mucjiso Ku Samaysay, Brazil Ayaa Riyadiisa Baabiisay Ugu Dambayna Kaadh Cas Ayaa Loo Taagay!! - AKHRISO Labadii Bilood Ee Musiibada Ee Lionel Messi. - Gool24.Net
Lionel Messi ayaa xalay soo dhammaystay tartankii Copa America isaga oo qalbi jab weyn lasoo kulmay isla markaana xulkiisa dhaafin waayay booska saddexaad sidoo kalena lasoo kulmay kaadhkii casaa ee labaad ee waayihiisa ciyaareed.
Waxa haatan laga joogaa ku dhawaad mudo sanad ah tan iyo markii uu Messi jamaahiirta Barcelona ugu khudbadeeyay inuu u keeni doono koobka Champions League oo uu ku sifeeyay koobka qurxoon balse ay seegeen.
Haddaba, Waxaanu halkan idiinku muujin doonaa wixii Lionel Messi soo qabsaday min 7-dii May oo ahayd maalin lagaga soo yaabsaday Anfield ilaa 7-da July oo maanta ah isla markaana laba bilood oo buuxda ah.
Wajiga Lionel ayaa ahaa midkii dareen kasta laga qaadan karayay markii uu kasii baxayay Anfield kaddib markii ay guuldarro 4-0 ah si layaab leh ugala kulmeen Liverpool oo ay lugtii hore 3-0 kusoo dubteen.
Reds iyo Jurgen Klopp oo ay ka maqnaayeen xiddigo muhiimad weyn kuleh safkooda ayaa meel iska saaray Barca iyaga oo adeegsanaya jamaahiirtooda waxaana ay rumeeyeen wixii aan suurogalka u ekayn.
Dhinaca kale kooxda Valencia ayaa bas-baas sii marisay nabarada Messi kaddib markii ay 2-1 kaga qaadeen Barcelona Copa Del Rey isla markaana ay 1 koob kusoo koobeen rajadii sadexleyda koobabka ah ee Barcelona lahayd.
Markale xulka Brazil ayaa dhawaan musiibadii ugu weyneyd baday Messi, Waxa ay Argentina kaga guuleysteen 2-0 iyaga oo markale waxba yahay ka dhigay rajadii Messi ee ahayd inuu mar uun koob weyn ku guuleeyo dalkiisa.
Ugu dambayn, Haddiiba Chile ay hore Leo ugu soo garaaceen Final-ada laba Copa waxa ay markale ku sababeen kaadhkiisii casaa ee labaad abid.
Kabtankii qarankaas ee Gary Medel oo ah shaqsi aan kaadhka cas waxba u arag si fududna fawdo uga sameeya garoomada ayaa Messi si toos ah u abaaray isaga oo madaxiisa ka saaray laabta dhawr jeerna riixay balse garsoorihii kulanka ayaa labadaba garoonka ka saaray.